मान्छेले दिनको ५२ मिनेट अर्काको कुरा गरेरै बिताउँछ ! – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / मान्छेले दिनको ५२ मिनेट अर्काको कुरा गरेरै बिताउँछ !
मान्छेले दिनको ५२ मिनेट अर्काको कुरा गरेरै बिताउँछ !
एजेन्सी । प्रत्येक मानिसले दिनमा एकपटक भएपनि आफ्ना अगाडि नभएको मान्छेको कुरा गरेकै हुन्छ । कसैको कुरा काट्ने बानी हुन्छ भने कतिले प्रशंसा र राम्रो नियतले पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा एउटा नयाँ अनुसन्धानपछि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका अध्ययनकर्ताहरुले मान्छेले दिनमा करिब १ घण्टा अरुका पछाडि कुरा गर्ने अर्थात ‘गसिप’ गरेर बिताउने गरेको खुलासा गरेका छन् ।
यसका लागि उनीहरुले ४६७ मानिसमा अध्ययन गरेका हुन् । सहभागी सबैमा एउटा सानो पोर्टेबल रेकर्डर लगाइएको थियो र दुईदेखि पाँच दिनसम्म उनीहरुका सबै संवाद र अन्तरक्रियाहरु अध्ययन गरिएको युनिभर्सिटीले जनाएको छ ।
अध्ययनकी उपप्रमुख तथा विश्लेषक मेगान रोबिन्स भन्छिन्, “वास्तवमा हामीले अरुबारे गरिने अधिकांश कुराहरु नकारात्मक, सकारात्मक केही नहुने गरेको पाएका छौँ । अनुसन्धानपछि मानिसहरुले गसिप गर्दा प्रायः तटस्थ अभिव्यक्ति दिने वा ‘न्युट्रल’ रहने गरेको पाइएको हो ।”
उनका अनुसार रेकर्डिङका तीन चौथाइ संवाद सकारात्मक वा नकारात्मक केही भन्न मिल्दैन ।
यसमा आफ्नो अगाडि नभएका मानिसबारे गरिएका सबै कुरालाई ‘गसिप’ का रुपमा लिइएको थियो जसलाई अनुसन्धानकर्ताहरुले सकारात्मक, नकारात्मक र न्युट्रल गरी तीन थरीमा विभाजित गरेका हुन् । पुरुषले भन्दा महिलाले धेरै गसिप गर्ने गरेको पाइएको हो तर उनीहरुको कुरा प्रायः न्युट्रल किसिमको हुने वा जानकारीमा आधारित विषयमा रहने गरेको बताइएको छ ।
जस्तै उनीहरुबीच भतिजीको कामका बारेमा वा साथीको क्यान्सर उपचार सम्बन्धि लगायत यस प्रकारका कुरा हुने गर्दछ । यता युवाहरुले भने वयश्कको तुलनामा बढी नकारात्मक कुरा गर्ने गरेको डाटाले देखाएको छ । त्यस्तै सेलिब्रेटीहरुका बारेमा मानिसले कमै कुरा गर्ने गरेको पाइएको हो जसलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।
अधिकांश मानिसहरु गरिब र अशिक्षितहरुले धेरै गसिप गर्ने गरेको विश्वास गर्दछन् तर अनुसन्धानले सो भनाइ गलत साबित गरेको छ । अनुसन्धानका अनुसार धनी र शिक्षितहरु नै अरुका बारेमा धेरै कुरा गरिरहेका हुन्छन् । अध्ययनकर्ताहरुले प्राकृतिक अवलोकनपछि निकालिएको यो निष्कर्ष वास्तवमै यस प्रचलित तर गलत बुझिएको व्यवहारबारे धेरैको धारणा परिवर्तन गराउने दाबी गरेका छन् ।
यो अध्ययन अघिल्लो महिना जर्नल ‘सोसियल साइकोलोजिकल एण्ड पर्सनालिटी साइन्स’ मा प्रकाशित थियो ।
Previous: आगलागीः दश महिनामा नौ जनाको जलेर मृत्यु
Next: धर्नालाई अर्गानिक तरकारीको हवः पूर्व सांसद खनाल